(Qalalaase Siyaasadeed hor leh) "Guddiga Garsoorka oo BJFS ansixin doonaan maalinta usbuuca soo socda" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Qalalaase Siyaasadeed hor leh) “Guddiga Garsoorka oo BJFS ansixin doonaan maalinta usbuuca...
(Qalalaase Siyaasadeed hor leh) “Guddiga Garsoorka oo BJFS ansixin doonaan maalinta usbuuca soo socda”
“Maalintii nala doortay illaa maanta waxa aan ku haynaa Shacabka! Xiriirka Shacabka & dowladda waa in la xoojiyo! waa in awoodda Shacabka lagu celiyo! oo Shacabkii waa kicinay! Laabtoodii waa kicinay! Waxa ay aaminsan yihiin in ay aadayaan doorasho toos ah! bacdamaa wax Alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay horay loosoo maray, Baarlamaankii sida la sheegayo iyaga oo ka cararaya madaxweynayaashii ayay waxa ay ay keeneen mid runtii xitaa aan la garanayn in ay ku soo noqonayaan dhammaantood, Laakiin shacabka ayaa heli doonaan Fursad, dalkeenu waxa uu heli doonaa in l ayiraahdo Soomaaliya waxa ay u gudubtay dimoqraadiyad, Baarlamaankii oo leh Sharci baan diyaarinay oo waa qaban karnaa doorasho, guddigii doorashooyinka oo leh doorasho waa qaban karnaa bacdamaa ay soo shaqqeynayeen muddo & Walaalaheey (Dowlad-goboleedyada) oo leh ma joogtaa xaaladda lagu qaban lahaa howshaas! Anigu haddaba Baarlamaankii ayaan dib ugu noqonayaa, waxa aan ku soo wargelinayaa wixii aan ku sheekeysanay saaxiibadey…..”.
Hadalkaasi waxa uu kamid ahaa Khudbaddii July 22, 2020 Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyey Shirkii Wadatashiga DG & Xukuumadda dhexe ee kadhacay Dhuusamareeb, waxa uu hordhac u ahaa 5 tallaabo oo muujisay in MW Farmaajo dadaal weyn ugu jiro sidii loo kordhin lahaa muddo-xileedka madaxtooyada iyo Baarlamaanka.
Haddaba haddii aan dib u eegno dhacdooyin is daba yaal ah oo muujinaya in MW Farmaajo aanu diyaar u ahayn doorasho, ee waxa kaliya uu rabo ay tahay Muddo kororsi sharci darro ah si marlabaad dib loogu soo doorto, aan isla fiirino shantaan qodob.
July 22, 2020 Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in uu golaha shacabka kula noqonayo wixii ay ku wada sheekeysteen isaga iyo saaxiibadii, (dowlad-goboleedyada)
July 25, 2020 Guddoonka golaha shacabku waxa uu fadhigii golaha ee maalinkaas si fowdo iyo buuq ah uga sheegay in xukuumaddii dhacday kuna fashilantay howshii loo igmaday! sidaas awgeedna ay farayaan madaxweyanha in uu soo magacaabo raisalwasaare Waddanka gaarsiiya doorasho.
Sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay MOL u xaqiijiyeen waxaa maalinta Isniinta ay Bisha Ogoosto tahay 3, 2020 la hor geyn doonaa Guddiga Adeegga Garsoorka oo shalay si sharicga baal marsan ay Golaha Wasiirada aan haysan kalsoonida Baarlabaanka ay ku ansixiyeen shirkii golaha wasiirada ee Khamiislaha.
Fahad Yasin, ayaa qorsheynaya in Guddiga cusub ee Garsoorka ay noqdaan Maxkamadda Dastuuriga ah iyadoo laga rabo in aay ansixiyaan muddo kororsi laba sano ah oo uu Golaha Baarlabaanka gacantaag ku ansixin doona ka hor shirka Dhuuso Mareeb 3, iyo ka hor inta aan lagu dhawaaqin Ra’isul Wasaaraha cusub ee lagu wado in uu soo magacaabo MW Farmaajo.
Ujeedka Fahad & Farmaajo ayaa ah in ay dhaqan geliyaan in dalka ay ka dhaceyso doorasho qof & cod ah bisha Febraayo ee sanadka 2023, taasoo ka dhigeysa muddo xileedka MW Farmaajo lix (6) sano.
Arrintan ayaa keeni doonto dagaal siyaasadeed kii ugu qaraaraa oo ka yimaada dowlad goboleedyada iyo Madasha Xisbiyada, waxaana loo badinayaa saadaashu in aay noqoto
In MW Farmaajo & Fahad ay ku guuleystaan muddo kororsiga ay rabaan si loo qabto doorasho qof & cod ah oo aanan shaki ku jirin in muddo 4 sano dib loogu dooran doono MW Farmaajo. AMA
In iska caabin xoog leh ay sameeyaan DG iyo Madasha Xisbiyada, taasna ay qasab ku noqoto in uu MW Farmaajo is casilo ka hor inta aan doorasho la qaban.
Previous articleXubno ay magacaabeen Golaha Wasiirada KMG oo la sheegay in ay sharci darro tahay.
Next articleMW Qoor Qoor oo masuuliyiin culus u maqacaabay xubnihii gudiga farsamo kumatali lahaa